यौ’नका सम्बन्धमा केही रो’चक कुरा, जुन तपाईले यो भन्दा पहिला सुन्नुभएको छैन – Jagaran Nepal
यौ’नका सम्बन्धमा केही रो’चक कुरा
जब–जब यौ’नको च’र्चा गरिन्छ, हामीमा नका’रात्मक भा’व पैदा हुन्छ । यौ’न भन्नसाथ हामीलाई लाग्छ, यो त छा’डा कुरा हो । जबकी यौ’नका स’म्बन्धमा हामी उत्तिकै उ’त्सुक पनि हुने गर्छौं ।
यौ’न सम्क’र्पका क्रममा महि’लाहरु जब पार्ट’नरप्रति प्रेम दर्शा’उछन्, उनीहरु अधि’क सुन्दर देखिन्छन् । यो भाव’नात्मक कुरा मात्र होइन । यसको बैज्ञा’निक कारण पनि छ । जब यौ’न सम्प’र्कको बेला महिलामा एस्ट्रो’जनको स्तर दुई गु’णा बढ्छ, त्यसैले उनीहरुको अनु’हारको छा’ला नर’म हुन्छ । के’स च’म्किलो हुन्छ । त्यसबेला उनीहरुको र’क्त प्र’वाह समेत बढ्छ, जसले म’हिलाहरु आ’कर्षक देखिन्छन् ।
विभिन्न कुराले दम्प’तीबीचको यौ’न जीव’नमा अव’रोध पैदा गर्छ । जस्तो कि, मो’टोपन, म’दिरा, तना’व, यौ’नरोग आदि । तना’वको सोझो अ’सर दम्प’तीको यौ’न जीवनमा पर्छ । तना’वग्र’स्त अवस्था’मा श्रीमान वा श्री’मती यौ’न स’म्बन्धका लागि त’यार हुन सक्दैनन् । भ’निन्छ, जुन व्यक्तिको तौ’ल बढी हुन्छ, उसको फ्या’ट सेल एस्ट्रो’जेन (फि’मेल ह’र्मोन) उत्पादन गर्छ । यसले उनको यौ’न–रुची’मा क’मी ल्याउँछ ।
नि’यमित रुपले मदि’रापा’न गर्दा यौ’नरुची घ’ट्छ । त्यतीमात्र होइन, यसले तपाईको शय’नकक्षामा पनि त’नाव निम्त्या’उँछ । डि’प्रेस’नले यौ’न जीवनमा नरा’म्ररी प्रभा’व पार्छ । एक त डि’प्रे’सनको कारण त’पाईमा यौ’न स’म्पर्कमा मन जादैन , अर्कोचाहि डि’प्रेसनको औष’धीले यौ’नरुची घ’टाउँ’छ ।
यौ’न स’म्बन्धका लागि सधै मु’ड हुँदैन । कति’पय अवस्थामा यौ’न स’म्बन्धका लागि प्र’तिकु’ल पनि हुन्छ । कस्तो अवस्थामा यौ’न सम्बन्ध उ’चित हुँदैन त ? यौ’न स’म्पर्कका लागि दुबै पा’र्टनर मान’सिक तथा शा’रीरिक रुपमा तयार हुनुपर्छ । यदि पार्ट’नरले इच्छा देखा’एको छैन भने ज’बर’जस्ती स’म्पर्क राख्नु राम्रो होइन ।
विशेष’ज्ञका अनुसार ग’र्भ’वती भएको छै’टौं हप्ताबाट बा’ह्रौ हप्तासम्म यौ’न स’म्पर्क न’राख्नु नै उचित हुन्छ । किनभने यसबेला यौ’न स’म्पर्क राख्नाले ग’र्भप’तनको सं’भावना हुन्छ । यसका साथै गर्भ’वती भएको अ’न्तिम दुई महिना पनि यौ’न स’म्पर्क राख्नु हुँदैन । श’ल्याक्रि’या चाहे जतिसुकै सा’नो होस, जबसम्म घा’उ पूर्ण रुपमा नि’को न’भएसम्म यौ’न स’म्पर्क राख्नु उचि’त हुँदैन ।
महिला ग’र्भ’वती हुनका लागि पु’रुषको लिं’ग यो’नीभित्र प्र’वेश गरेकै अवस्था हुनुपर्छ भन्ने छैन । यो’नीको मु’खको सा’मुन्नेमा वि’र्य रह्यो भने पनि महि’लाहरु गर्भव’ती हुन सक्छन् । अ’नौठो त के भने, वि’र्य पो’षक हुन्छ । यसमा भिटा’मिन सि, क्या’ल्सियम, म्या’ग्नेसि’यम पोटा’शियम, भिटा’भिन बी–१२ समेत हुने एक अध्यय’नमा दा’बी गरिएको छ । संभो’गपछि यो’नीलाई रा’म्ररी सफा गर्दा ग’र्भ रहदैन भन्ने सोंच गल’त हो । किनभने यतिबेलासम्म स्प’र्म धेरै स’क्रिय भैसकेको हुन्छ ।
कसरी गर्छन् महिलाले ‘हस्त मैथुन’ ?
यो’नी कसिलो कसरी बनाउने ? जान्नुहोस्